October 21, 2020 adminLeaveaComment on सरकारको पछिल्लाे कार्यशैलीले महामा,री झन् विकराल बन्न सक्छ : डा. भट्टराई
काठमाडौं, ५ कात्तिक । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारको पछिल्लाे कार्यशैलीले को`रोना महामा`री झन् विकराल बन्ने बताउनुभएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका भट्टराईले ट्वीट गर्दै महामा`रीका बेला जनताले पाउने स्वास्थ्य अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने ठाउँमा भागेर सरकारले गैरजि`म्मेवारीपन देखाएको उहाँको आ`रोप छ । पैसाको अभा,वका का,रणले यस्तो निर्णय लिइएको हो […]
October 21, 2020 adminLeaveaComment on चीनको सहयोगमा बनेको दरबार हाइस्कुलको भवन राष्ट्रपतिद्वारा उद्घाटन
काठमाडौँ, ५ कात्तिक । चीनको सहयोगमा निर्माण भएको दरबार हाइस्कुल भवन नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । चिनियाँ सरकारको ८५ करोडको लागतमा निर्माण पूरा भएको भवन बुधबार नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । चिनियाँ सांघाई कन्सट्रक्सनले निर्माण गरेको राष्ट्रपति भण्डारीले अनावरण गर्नुभएको हो । भवन पुरानै मौलिक शैलीमा बनाइएको छ । ६ महिनाअघि नै निर्माण […]
सरकारले राजदूतमा सिफारिस गरेका डा. युवराज खतिवडा र लोकदर्शन रेग्मीविरु`द्ध संसदीय समितिमा चार वटा उ`जुरी परेका छन्। अमेरिका, बेलायत र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्ता`वित राजदूतवि`रुद्धका उ`जुरी संसदीय सुनुवाइ समितिले सोमबार खोलेको हो । १० दिनको म्याद दिएर सार्वजनिक उजुरी आह्वान गरेको समितिले दुईजनाविरु`द्धमा परेका ४ उजुरी खोलेको हो । संसदीय सुनुवाइ समिति स्रोतका अनुसार प्रस्ता`वित […]
केही हप्ता अघाडी TikTok ब्यान्ड गरेको पाकिस्तानले पुनः खोल्यो,किन खोल्यो?यस्ता छन् कारण!,,, हेर्नुहोस।
October 21, 2020 October 21, 2020 adminLeaveaComment on केही हप्ता अघाडी TikTok ब्यान्ड गरेको पाकिस्तानले पुनः खोल्यो,किन खोल्यो?यस्ता छन् कारण!,,, हेर्नुहोस।
पाकिस्तानले लोकप्रिय भिडियो शेयरिङ एप टिकटकमाथिको प्र’तिबन्ध हटाएको छ । अश्लीलता फैलाएको आ’रोपमा टि’कटकमाथि के”ही हप्ताअघि मात्र प्रतिबन्ध ल’गाएको पाकिस्तान सरकारले त्यस्तो प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको हो । आफ्ना अकाउन्टमा अश्लील भि’डियो राख्ने वा अनैतिक चीजहरुको प्र,सार गर्ने सबै प्रयो”गकर्ताको अका,उन्ट टिकटकले ब्ल’क गरिदिएसँगै पा’किस्तानले यस्तो कदम चालेको बताइएको छ। टिकटकले पाकिस्तान सरका’रका शर्तहरु पालना गरी […]
October 18, 2020 October 18, 2020 adminLeaveaComment on ‘प्र,चण्डले बेग्लै पार्टी चलाएको ओलीको आ,रोप’
काठमाडाैं, २ कार्तिक । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बेग्लै पार्टी सञ्चालन गर्न खोजेको आभास दिइरहेको आ`रोप लगाएका छन्। बालुवाटारमा शनिबार दिउँसो कर्णाली प्रदेशका नेताहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले दाहालमाथि त्यस्तो आ`रोप लगाएका हुन्। ‘एउटै पार्टीका नेताहरूलाई उहाँले बेग्लाबेग्लै भेट गर्नुभयो। सम,स्या हो, सम`स्या छ भने त्यसलाई सम्बो,धन गर्न सामुन्नेमा राखेर […]
October 17, 2020 adminLeaveaComment on ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने व्यावहारिक अभ्यास अघि बढाएका छौं : प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ, १ कार्तिक । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले नेपालमा काेही पनि भाेकले नमर्ने बताउनुभएकाे छ । उहाँले गरिबीकै कारण ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने व्यावहारिक अभ्यास अघि बढाइरहेको बताउनुभएकाे हाे । ४० औं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवसको अवसरमा एक शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकको आधारभूत खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने अभियानलाई सार्थक […]
October 16, 2020 adminLeaveaComment on यस पटकको दसैंमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र पूर्वराजाले सर्वसाधारणलाई टीका नलगाइदिने
काठमाडौं, ३० असोज । को`रोना भाइ`रसका कारण हरेक वर्ष विशिष्ठ व्यक्तिले सर्वसाधारणलाई लगाइदिदै आएको टीकाको कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । सरकारले आम नागरिकलाई नै स्वास्थ्य सुरक्षा मापद`ण्ड अप`नाएर दसैं मनाउन र टीका ग्र`हण गर्न भनिरहेकाले विशिष्ठ व्यक्तिले मापद`ण्डको पालना गर्दै सर्वसाधारणलाई लगाइदिने टीकाको कार्यक्रम स्थगित गरेका हुन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री […]